अल्ट्रासोनिक सहयोगी ड्र-पिलिंग तार रड्स (UADP) - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
तार रड को ड्रिगर-पेलिंग सतह को गुणवत्ता मा बाह्य सामाग्री परिधि देखि छीलने को लागी महत्वपूर्ण गुणवत्ता मा सुधार गर्दछ। यो रोटरी-पछाडि, बालुवाटार वा पीसिंगको लागि एक व्यापक रूपमा ज्ञात विकल्प हो। अल्ट्रासोनिक रूपले सहयोग गरेको ड्रि-पलिङले छीने उपकरणको उच्च आवृत्ति कम्पनेशन प्रयोग गर्छ। पिरोलिने उपकरणको उच्च स्तरीय दीर्घकालीन आचरण चित्रकारी शक्तिहरूलाई कम गर्छ र सामग्री सतहको गुणस्तरमा सुधार गर्दछ।
ड्रिगर-पछाडि के हो?
धेरै कम सतह मोटाई को सुपीरियर सतह को गुणवत्ता ड्रा ड्रिलिंग प्रक्रिया को मुख्य उद्देश्य हो। ड्रिगर-पछाडि पछि, तार रोडमा एक धेरै समृद्ध सामाग्री संरचना र उच्च सामग्री शुद्धता छ। ड्रिगर-पिक्सेलमा सतह दोषहरू जस्तै अक्सिजन, च्याट अंकहरू, रोल स्कोरहरू, स्केल साइजहरू, डबल खालहरू, ओवरलैपहरू, समाईहरू र डेकबर्जीकृत मार्जिन परतहरू जस्ता फलाम जस्ता धातुहरू वा इस्पात वा लोहेका सामग्रीहरू हटाउँछन्। ड्रक-पेइङको एक प्रमुख अनुप्रयोग फलाम तार रोडबाट स्केल र सतह को जंग हटाउने हो। तांबा जस्ता अलौह धातुहरू, रोलिंग वा रेखाचित्र पछि कडा सतह तहहरू हटाउनका लागि ड्रिल-पिक्सेलमा आवश्यक पर्दछ। ड्रिगर-प्लिङ प्रक्रियाले तार रड सतहबाट एक मिनेटमा 0.01mm र 0.25 मिटरको बीचमा हटाउन सक्दछ। ड्रिगर-पछाडि हिउँदको रूपमा चिनिन्छ, स्केलपिंग वा ब्याक-म्यान शेभर।
ड्रिलिंग बनाउनुहोस्। रोटरी-पेइङ
तार रोडहरूका लागि, 25 मिमी व्यास भन्दा कम प्रोफाइल वा ट्याब्लेटहरू, रोटरी-पेइङमा ड्रि-पिलिङको ठूलो फाइदाहरू छन्। तार रोडहरूको रोटरी-पिक्सेल उत्पादन गति सीमित गर्दछ र हुन सक्छ कि लहर वा सर्पिल संरचित सतहहरूमा सानो तार छडहरूमा। ड्रप-पिसिङ काटने उपकरणले खाना निर्देशनमा समानांतरलाई परार्छ। यो तार रड संग उच्च ढाँचा को लागी र ड्रिगर-छीलने वाला उपकरण को एक उच्च स्थायित्व सम्म जान्छ। सामान्यतया, ड्रिगर-पछाडिको उपकरणहरूको लागि लागत रोटरी-छीलने प्रणाली भन्दा कम छन्।
अल्ट्रासोनिक रूपमा अस्ट डरे-पिलिङ (यूएडीपी) को लाभ के हो?
तार रोडहरूको ड्रिगर-पछाडिको शक्तिलाई घर्षण हटाउन र सामग्री काट्न आवश्यक छ। एक पारंपरिक ड्रि-पिलअप सेटअपमा, यो शक्ति घूर्णन क्यापिस्तानबाट मात्र हुन्छ। तारमा टाँसेली बलले छिटो रेखा गति, तार व्यास र छीने तह मोटाईको साथ उठाउँछ। तनसिल शक्ति र उपज शक्ति विशेष गरी साना कारक को लागि महत्वपूर्ण कारक हुन्, किनकि क्रस-सेक्शन क्रस-सेक्शन सानो अनुपातमा सानो डाइमेन्टको लागि उच्च हुन्छ। यसले ड्रिगर-पछाडिको रेखा गति सीमित गर्दछ वा यसले पारंपरिक ड्रिगर-पेलो असंभव बनाउँछ जुन फ्रिजको उच्च जोखिमको कारण हो।
अल्ट्रासोनिक रूपमा मद्दत ड्रिगर-पेलिङले काटिएको उपकरणलाई तेज आवृत्तिको उच्च आवृत्ति थम्बनेल कम्पनेशन प्रयोग गर्छ। सामान्य कम्पन आवृत्ति 20 कि.जी.एचज हुन्छ, छीने किनारा विस्थापन अप 100 माइक्रोन (पीके-पीके) सम्म हुन सक्छ। छीने उपकरण उपकरण कम्पनिकी वेग र तार रड गति को बीच उच्च अनुपात, कम तार तार मा तन्य बल हुन सक्छ। यसैले अल्ट्रासोनिक रूप देखि संचालित ड्रिगर-पिलिलले कुनै पनि तलको शक्ति सीमाको लागि एक पछाडिको चरणमा छिटो ड्रिल लाइन पङ्क्ति वा बढी सामग्री हटाउने अनुमति दिन्छ। टensile बल मा कमी अल्ट्रासोनिक powered draw-peeling साना सामाग्री डाइमिटरको लागि र ट्यूबहरु जस्तै खोखला को तार को लागि सबै भन्दा अनुकूल।
तार रोडहरू क्याप्टेन ड्राइभमा सुरू गर्ने र रोक्दा च्याटर अंकहरू र अंशहरूको प्रवचन गरिन्छ। यो नरम वा धेरै लोचदार सामग्री र साना क्रस वर्गहरूको लागि थप समस्याग्रस्त छ। अल्ट्रासोनिक रूपमा भाइब्रेटेड छान्ने उपकरण प्रति सेकेण्ड 20,000 पटक अगाडि बढ्छ। मर्मत मर्दाको यो निरन्तर आन्दोलनले तान्सा तनावलाई कम गर्छ र यसले तार रड सतहको छेउमा च्याटर अंक र रसहरू छोयो।
अधिक अल्ट्रासोनिक कम्पनले काट्ने उपकरण किनारालाई सामग्रीमा पुर्याउँछ, तल्लो तार रड तनाव हुन सक्छ। यसले सामग्री र आयामहरूको आधारमा 50% सम्मको महत्त्वपूर्ण तनाव कम गर्छ। सामान्यतया, तनावमा कमीले लाइन गति वृद्धि गर्न मौका खोल्छ। तैपनि, तार रोड गतिको उपकरणको कम्पनिकी वेगको तल कम्तीमा 20% हुनु पर्छ।
अल्ट्रासोनिक रूपमा अस्ट डरे-पछाडिको लागि के चाहिन्छ?
UADP ले तपाइँको मानक पछाडि / शेभर उपकरण प्रयोग गर्दछ। एक अल्ट्रासोनिक गुंजाइश – पनि सोनोट्रोड भनिन्छ – पारंपरिक उपकरण धारकलाई बदल्नुहोस्। यो सोनोट्रोड हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक्स को एक विशेष नवाचार हो। यसले कुकुरको उपकरणमा कुशलतापूर्वक अल्ट्रासोनिक लम्बाइब्रेसन कम्पनलाई पठाउँछ। स्थापना स्पेस सुरक्षित गर्न अल्ट्रासोनिक चालक – ट्राडड्युडरर पनि भनिन्छ – सोनोट्रोड माथि शीर्षबाट आउँछ। एक साधारण UADP सेटअप 250mm भन्दा लामो लामो दिशामा आवश्यक छ।
अल्ट्रासोनिक कम्पनहरू हाम्रो मानक अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरूद्वारा उत्पन्न हुन्छन्, जस्तै: UIP1000hdT (1.0kW), UIP1500hdT (1.5kW), UIP2000hdT (2.0kW) वा UIP4000 (4.0kW)। यी एकाइहरूले संसारभरको 24 घण्टा /7डी अपरेसनमा विभिन्न प्रक्रियाहरू चलाउँछन्। वास्तविक शक्ति आवश्यकता रेखा गति, भौतिक र आयामहरूमा निर्भर गर्दछ। अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू कन्क्वाइभ गर्न योग्य छन्, लाइन गतिमा विकासहरू बढी शक्ति आवश्यक पर्दछ। उच्च पावर अनुप्रयोगहरूको लागि, हामी दुईवटा अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरू सँगै एक छीने उपकरणहरू (2 × 4kW सम्म) ड्राइभ गर्न सक्दछौं।
तपाईं कुनै पनि अवस्थित ड्रक-पेलिंग मशीनहरू सजिलै अल्ट्रासोनिक प्रणालीसँग पुनःप्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै मेशिन निर्माताहरू जस्तै किसेलस्टीन (जर्मनी) हाम्रो प्रणाली प्रयोग गरी स्थापना वा रिट्रोफिटसँग राम्रो परिचित हुनुहुन्छ। केहि नयाँ मिसिनहरु को अल्ट्रासोनिक सिस्टम रिट्रोफिट को लागि आवंटित स्थान छ।
कृपया हामीलाई तपाईंको ड्रिगर-पिकाउने आवश्यकताहरूको बारेमा बताउनुहोस्। हामी तपाईंको प्रक्रिया र मेशिनमा अल्ट्रासोनिक्स लाई एकीकृत गर्न को लागी काम गर्न खुशी हुनेछौं। कृपया सामग्री निर्दिष्ट गर्नुहोस्, लाइन गति, तनाव, तनाव सीमा र डाईमिटर। तपाईको प्रक्रियाको उद्देश्य के हो? हामी तपाईंको सामग्रीसँग एकल चरण ड्रिगर-पिक्सेल प्रणालीमा एक ड्रिगर-पेइङ टेस्ट चलाउन सक्छौं।
त्यहाँ धेरै तार रड प्रक्रियाहरू छन्
अल्ट्रासोनिक रूप देखि सहायता तार प्रसंस्करण को अन्य अनुप्रयोगहरुमा निम्न समावेश छ:
अल्ट्रासोनिक रूपमा एस्स्ड ड्र Draw-Cleaning (UADC)
अल्ट्रासोनिक तारहरु, पाइपहरु र प्रोफाइल को सफाई
अल्ट्रासोनिक वायर डिइज र एक्सट्र्युजन मार्गदर्शिकाको सफाई
सतह उग्रता पैरामीटर: रा, आरजे, आरटी
Ra सतह मोटाईको परिमिति हो। यो मतलब रेखा बाट प्रोफाइल को विचलन को गणित को मतलब हो। यो धेरै नमूना लम्बाईको मतलब परिणामको रूपमा गणना गरिएको छ। आरजे एक सतह 109औं उचाइ प्यारामिटर सतह सतह मोटेको लागि हो। यो एक नमूना लम्बाई मा मापन गरिएको छ। यो5उच्च चोट र नमूना लम्बाई भित्र पाँच सबभन्दा कम घाटी बीचको गणना गरिएको औसत उचाइ भिन्नता हो। आरटी नमूना लम्बाइको साथ अधिकतम चोटीदेखि घाटी उचाई हो। यो सामान्यतया पाँच लगातार नमूना लम्बाइको औसत आरटीएमको रूपमा निर्धारण गरिन्छ।